Dalxiisayaal Ruush ah ayaa lagu xiray Turkiga ka dib markii ay bilaabeen dabka Antalya
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Turkiga » Dalxiisayaal Ruush ah ayaa lagu xiray Turkiga ka dib markii ay bilaabeen dabka Antalya
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Crime • Wararka Dowladda • News • Dadka • Waajib ah • Wararka Ruushka • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Turkiga
Dalxiisayaal Ruush ah ayaa lagu xiray Turkiga iyaga oo bilaabay dabka kaynta.
Tamashlaha Ruushka ayaa looga shakisan yahay inay si ula kac ah u shideen dab ka kacay meel u dhow goob caan ah oo loo dalxiis tago oo Turkiga.
Dab duurjoogta ah ayaa laga yaabaa inay bilaabeen dalxiisayaal Ruush ah oo ku socday jidka caanka ah.
Dalxiisayaal Ruush ah ayaa la xiray intii ay socotay baaritaanka ka hor xaaladda dhacdada.
Dab-damiska Turkiga ayaa lagu riixay xadka iyagoo la dagaallamaya dabka xagaaga ee sanadkan.
Isniintii, booliiska Turkiga ayaa xiray koox dalxiisayaal Ruush ah Antalya, kadib markii la sheegay in uu dab ka kacay dhul kayn badan oo baadiyaha ah.
Sida laga soo xigtay sharci fulinta maxalliga ah, toddobo muwaadiniin Ruush ah ayaa looga shakisan yahay inay si ula kac ah u bilaabeen dab ka kacay meel u dhow goob dalxiis oo caan ah.
Maamulka maxalliga ah ee aagga Çağlarca ayaa ku andacoonaya in dabka Sabtida laga yaabo inuu ka dhashay dab ay dejiyeen koox dalxiisayaal Ruush ah oo ku socday jidka caanka ah ee Lycian Way.
Sida uu sheegay af-hayeen u hadlay ergada diblumaasiyadeed ee Ruushka ee ku sugan Antalya, Maxkamaddu waxay qaadatay go'aan ah in la xiro dalxiisayaasha Ruushka inta lagu guda jiro baaritaanka ka hor dacwadda xaaladaha dhacdada.
Lix qof oo kale ayaa sidoo kale lagu xiray Turkey Bishii Agoosto, iyadoo looga shakiyay inuu dab qabadsiiyay dhulka keymaha, markan oo lagu eedeeyay in uu dab qabadsiiyay. Bilaysku waxa ay ahayd in ay dhab ahaantii u istaagaan sidii ay u ilaalin lahaayeen tuhmanayaasha, kuwaas oo ay durba daba socdeen dad cadhaysan oo deegaanka ah.
Saddex qof oo kale ayaa hore loogu xidhay Bodrum ka dib markii ay booliisku sheegeen in la qabtay iyaga oo dabada sigaarka ka tuuraya daaqadda gaadhiga xilli ay ku sii socdeen meel kayn ah oo qallalan.
Dab-damiska Turkiga ayaa lagu riixay xadka xagaagii iyagoo la dagaallamaya dabka duurjoogta ah, qaar badan oo ka mid ah waxay halis geliyeen goobaha caanka ah ee loo dalxiis tago ee agagaarka Antalya iyo Mugla.
Qiyaastii 107 Turkey Dab-damisku waxay u baahdeen tallaabooyin degdeg ah oo ay sameeyeen dab-demiyeyaasha. Boqolaal qof ayaa ku dhaawacantay dabka sii faafaya, waxaana kumannaan qof laga daad gureeyay guryahooda.
Guddiga Dalxiiska Afrika ayaa u aqoonsaday Costa Rica dal...
USA CDC "Ka Fogow Safarka" Heerka Hadda laga saaray Jamaica
Shirkadda Airbus iyo Air Lease Corporation ayaa soo bandhigtay shirkad cusub oo...
Calaamadaha COVID-19-Dheg-dheer ee Dadka Qaba Rheumatic...